Svondo, Kukadzi 07, 2016 Local time: 03:06
VaZuma naVaMugabexVaZuma naVaMugabe
Irwin Chifera, Blessing Zulu
WASHINGTON— Gwaro rekutanga rebumbiro remitemo kana kuti COPAC Draft Constitution, rave kutarisirwa kuti richiende ku All Stake Holders Conference yechipiri kunyange hazvo pachine kunetsana kwakanyanya pakati pemapato ari muhurumende yemubatanidzwa.
Munyori weSADC, VaTomaz Salomao, vaudza Studio 7 kuti vakatoudza VaZuma kuti vape SADC Troika gwaro rezviri kuitika vobva vaita musangano kuTanzania kutanga kwaGumiguru. Mutungamiri weTanzania, VaJakaya Kikwete, ndivo sachigaro weSADC Troika. SADC inoti inoda kuti referendamu iitwe muna Gumiguru sarudzo dzozoitwa pakati pegore rinouya. Mapato maviri eMDC akatozivisa kuti anoda kuti SADC ipindire asi Zanu-PF iri kutsika madziro.